Basenkingeni othisha abajola nabafundi | News24
Basenkingeni othisha abajola nabafundi
ISITHOMBE: sithunyelweUNgqongqoshe wezeMfundo esifundazweni sakwaZulu-Natal uMnu Mthandeni Dlungwane ngesikhathi ekhuluma nezinkumibi zabafundi eMbali ngoLwesihlanu.
BAZULELWA ngamanqe othisha bezikole zaKwaZulu-Natal abanobudlelwane bezothando nezingane abazifundisayo njengoba uNgqongqoshe wezeMfundo esifundazweni iKwaZulu-Natal uMnu Mthandeni Dlungwana esenxuse abafundi ukuba baphumele obala uma ngabe kukhona othisha ababaziyo abenza lokhu.
UMnu Dlugwane ukusho lokhu ngoLwesihlanu olwedlule mhla zili-17 kuNcwaba (August) ezinkundleni zemidlalo eMbali Unit 1 nalapho ekade ezokwethula khona ngokusemthethweni uhlelo lokulwisana neokusetshenziswa kwezidakamizwa ezikoleni.
Isiqubulo salolu hlelo sithi ‘Matriculate alive’ (yenza umatikuletsheni usaphila).
Abafundi abangaphezu kwama-60 abaphuma ezikoleni ezahlukene zaseMbali baphumele obala ngokusebenzisa izidakamizwa kodwa bathi sebefuna ukushintsha izindlela zabo.
Lokhu kulandela ngemuva kokuba iMeya kaMasipala uMsunduzi uMnu Themba Njilo enxuse abafundi abadla izidakamizwa futhi asebefuna ukuziyeka ukuba beze phambili ukuze bezothola usizo.
Ungqongqoshe uDlungwane usole ama-container aseduze kwezikole ngokuba iwona ashushumbisela abafundi izidakamizwa ezikoleni.
Uthe into abayibheke kakhulu benguMnyango wezeMfundo ukuba bathole ukuthi lezi zidakamizwa zisuka kubani.
“Nakuba sifuna ukuthola umuntu odayisela abafundi lezi zidakamizwa, into esiyibheke kakhulu ukuthola umuntu lona okunguyena ozenzayo lezi zidakamizwa.
“Sikhathazekile ngendlela okuqhubeka ngayo ezikoleni.
“Uphenyo lwethu siwuMnyango wezeMfundo luveza ukuthi isibalo sabafundi abaqala uGrade R ezikoleni kuya kumatikuletsheni sesehlile ngenxa yezinqumo ezithathwa abafundi okubalwa kuzona ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Njengoba sethula uhlelo olufana nalolu yingoba sifuna ukunibona ukuthi ninekusasa eliqhakazile. Sifisa ukuthi uma nisesikoleni nifunde ningalibali ukwenza izinto eziseceleni. Siyazi ukuthi kuzoba khona izilingo kodwa sifuna nina nibe yizingane nigweme izinto ezimbi,” kusho yena.
UMnu Dlungwane ube esenxusa abafundi ukuba baphumele obala ngalabo thisha abanobudlelwane bezothando kanye nobezocansi nabafundi. Uthe bewuMnyango angeke baze bakubekezelele ukuthi babe nothisha abanjalo ezikoleni zaKwaZulu-Natal.
“Uma kungukuthi kunothisha enibaziyo abanobudlelwane nabafundi ningesabi ukuthi niphumele obala nize kuthina nizosibikela ukuze sizobhekana nabo labo thisha abenza lokho.
“Uma sike nje sawuthola umbiko okanye izinsolo ezithi kunothisha onobudlelwane bezothando okanye bezocansi nomfundi uzobe esemiswa ngokukhulu ukushesha lowo thisha kuze kuba kuphothulwa uphenyo ngalezo zinsolo.
“Sizimisele ukuthi sibhekane nabo labo thisha abagila le mikhuba. Kungumsebenzi wami ukuthi nginivikele ezintweni ezifana njengalezi yingako ngininxusa futhi nginikhuthaza ukuba nikhulume ukuze ngizokwazi ukuthi nginivikele,” kubeka yena.
UMnu Njilo uthembise ngokuthi bazobasiza laba bafundi asebephumele obala ukuthi bafuna ukuyeka izidakamizwa besebenzisana nezinhlaka ezahlukene ezingaphansi kukaMasipala uMsunduzi.